स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस – यसरी सफा गर्नुहोस् !:: Mero Desh
स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस – यसरी सफा गर्नुहोस् !
Published on: ९ बैशाख २०७७, मंगलवार ०९:३९
जर्मन रिसर्चरहरूले गरेको एक अनुसन्धानले कोरोनाभाइरस स्मार्टफोनको डिस्प्ले र अन्य सिसाको सतहमा ९ दिनसम्म बस्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । धातुको सतहमा पनि यो भाइरस ९ दिन सम्म नै बाँच्न सक्छ । कुनै पनि स्मार्टफोनमा धातु र सिसाको प्रयोग भएको हुनाले
तपाईंको स्मार्टफोनले पनि कोरोनाभाइरसलाई ९ दिनसम्म बोकेको हुन सक्छ । यी उपकरणहरू कसरी सफा गर्ने भनेर पनि उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । स्मार्टफोन लगायात अन्य विद्युतीय ग्याजेट र उपकरणहरू – जस्तै ट्याब्लेट, क्यामरा, ल्यापटप आदिलाई पनि सफा राख्नु उचित हुन्छ र सफा गर्न निकै सजिलो पनि रहेको छ । उक्त अध्ययनका अनुसार डिस्प्ले र अन्य सतहलाई सफा गर्नका लागि ०.१% ब्लिच र लगभग ७० प्रतिशत इथानोलको ( रक्सी ) मिश्रण नै काफी छ । बजारमा पाइने ह्याण्ड स्यानीटाइजरमा यी कुराहरू पहिलेबाट नै हुने भएकाले डिस्प्ले सफा गर्नका लागि ह्याण्ड स्यानीटाइजर प्रयोग गरे हुने कुरा उक्त अध्ययनको निष्कर्षमा व्यक्त गरिएको छ ।